कपाल कैंची - FAQ - जापान कैंचीको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
केश कपालका लागि सामान्य प्रश्नहरू
जब तपाइँ कपाल को लागी सबै भन्दा राम्रो कैंची मा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ विचार गर्न को लागी धेरै पक्षहरु छन्।
मैले कस्तो प्रकारको एर्गोनोमिक कैंची किन्नु पर्छ?
कुन ब्रान्डले तपाईंको आवश्यकता अनुरूप कैंची बनाउँछ?
कुन साइज (लम्बाइ) तपाईंले किन्नु पर्छ?
FAQ ले प्रत्येक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेछ, र अधिक!
यदि तपाइँ भर्खरै कपाल काट्ने क्षेत्रको अन्वेषण गर्न थालेको हुनुहुन्छ भने, वा तपाइँको कपालमा स्तरवृद्धि खोज्ने अनुभवी पेशेवर तपाइँलाई आवश्यक जानकारी जाँच गर्नुहोस् कि फरक पर्दैन!
नयाँ कैंची किन्दै
अहिले किन्नुहोस्, पछि भुक्तानी विकल्पहरू
जापान सिजर्समा उपलब्ध विभिन्न Buy Now, Pay Later विकल्पहरू छन्। प्रत्येकले तपाइँलाई नयाँ कपाल कातरहरू तुरुन्तै अर्डर गर्न र समयको साथ तिर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं hairdressing कैंची र नयाँ जोडी किन्न सक्नुहुन्छ हप्ता वा महिनाहरूमा तिनीहरूको लागि तिर्नुहोस्! तपाईंले चेकआउटको अन्त्यमा भुक्तानी विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ।
आफ्टरपे (थप पढ्नुहोस्): मा उपलब्ध छ अष्ट्रेलिया (🇦🇺), क्यानडा (🇨🇦), न्युजिल्याण्ड (🇳🇿) र युनाइटेड किंगडम (????????)
Zip भुक्तानी (थप पढ्नुहोस्): मा उपलब्ध छ अष्ट्रेलिया (🇦🇺) & न्युजिल्याण्ड (🇳🇿)
लेबुइ (थप पढ्नुहोस्): मा उपलब्ध छ अष्ट्रेलिया (🇦🇺), संयुक्त राज्य अमेरिका (????????), न्युजिल्याण्ड (🇳🇿) र युनाइटेड किंगडम (????????)
सेजल (थप पढ्नुहोस्): मा उपलब्ध छ संयुक्त राज्य अमेरिका (????????)र क्यानाडा (🇨🇦)
सबैभन्दा लोकप्रिय भुक्तानी विधिहरू हुन् Afterpay, Zippay, Laybuy र Sezzle। तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् कुन भुक्तानी विधि तपाइँको आवश्यकताहरु लाई उपयुक्त छ भनेर पत्ता लगाउन!
के नि: शुल्क ढुवानी उपलब्ध छ?
नि: शुल्क ढुवानी सबै हेयरड्रेसिङ कैंची अर्डरहरूको लागि उपलब्ध छ। हामी तपाईंको अर्डर तयार गर्छौं र छिटो ढुवानी गर्छौं ताकि तपाईं दिनहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, हप्ताहरूमा होइन!
प्रत्येक अर्डर ट्र्याकिङको साथ आउँछ र हामी उपलब्ध उत्तम ढुवानी विकल्प प्रयोग गर्छौं (FedEx, TNT, AusPost, आदि) तपाईंले सकेसम्म चाँडो आफ्नो कैंची प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न।
कपाल काट्ने कातरहरू अर्डर गरेपछि, तपाईंले चाँडै आफ्नो अर्डरको लागि ट्र्याकिङ नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई प्याकेजको ट्र्याक राख्न अनुमति दिन्छ किनकि यो चाँडै तपाईंको ठेगानामा आइपुग्छ।
म कसरी ब्याकअर्डर गर्छु (पूर्व-अर्डर) हेयरड्रेसिङ कैंची?
केही हेयरड्रेसिङ कैंची मोडेलहरू बिक्री हुन सक्छ। तपाईं यी द्वारा ब्याकअर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्राहक हेरचाह टोली इमेल (hello@japanscissors.com.au)
तिमी सक्छौ आफ्नो अर्डर सुरक्षित गर्न एक जोडी पूर्व-खरीद समय अगाडी, वा स्टक आइपुग्दा सूचित गर्न अनुरोध।
ब्याकअर्डरको साथ आफ्नो हेयरड्रेसिङ सिजर अर्डरहरू पूर्व-खरीद गर्ने ग्राहकहरूलाई प्रतीक्षा सूचीमा प्राथमिकता दिइनेछ।
तपाईं आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गरेर उत्पादन पृष्ठमा आफ्नो कैंची ब्याकअर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले खोजिरहनु भएको कुनै आउट-अफ-स्टक मोडेल छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्!
मेरो अर्डर प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
हामीले हरेक अर्डरलाई सकेसम्म चाँडो पठाउछौं, ताकि तपाईंले आफ्नो हेयरड्रेसिङ कैंची दिनमा नभई हप्तामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
औसतमा तपाईको अर्डर आउन दुईदेखि चार दिन लाग्छ।
सजिलो 7-दिन फिर्ता र विनिमय ग्यारेन्टी
हामी बुझ्छौं कि कपाल काट्ने कैंची अनलाइन अर्डर गर्न सधैं सजिलो छैन, त्यसैले जापान सिजर्सले सजिलो (प्रश्न-सोधिएको) 7-दिन फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
आफ्नो हेयरड्रेसिङ कैंची अर्डर गरेको ७ दिन भित्र, तपाईले हाम्रो ग्राहक सेवा टोली (hello@japanscissors.com.au) लाई साइज, मोडेल, वा फिर्ता गर्न र आफ्नो अर्डर फिर्ता गर्न अनुरोध गर्न इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
हेयरड्रेसिङ कैंची छनोट गर्दै
कैंची एर्गोनोमिक्स के हो?
एर्गोनोमिक कैंची सामान्यतया तिनीहरूको ह्यान्डलहरू द्वारा परिभाषित गरिएको छ। सबैभन्दा लोकप्रिय एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरू अफसेट, क्रेन, कुंडा र थप छन् (थप पढ्नुहोस्).
अफसेट डिजाइन जस्ता हेयरड्रेसिङ कैंची ह्यान्डलहरू थप सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको हो प्राकृतिक पकड जसले तनाव कम गर्दछ आफ्नो हात, नाडी, आदि मा।
एर्गोनोमिक कैंची देखाइएको छ तनाव को मात्रा कम गर्नुहोस् आफ्नो हात, पाखुरा र पछाडि काट्दा।
यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले पनि मद्दत गर्न सक्छन् दोहोरिने तनाव चोट ( RSI ), अनुभव गर्दै कार्पल सुरंग सिंड्रोम or टाउको दुखाइ शरीरका अन्य अंगहरूमा जस्तै काँधमा!
कसलाई एर्गोनोमिक कैंची चाहिन्छ? हामी हेयरस्टाइलिस्टहरू, नाइहरू, र लामो समयसम्म कपाल काट्ने जो कोहीलाई एर्गोनोमिक जोडी हेयरड्रेसिङ कैंची प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं।
सही कैंची आकार कसरी छनौट गर्ने?
सही काट्ने कैंची मा निर्भर हुनेछ कपाल काट्ने प्रविधिहरू तपाईको प्रयोग सैलुनहरूमा हेयरस्टाइलिस्टहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कपाल काट्ने कैंची साइज 5.5" हो। छोटो ब्लेडले सटीक र अधिक सटीक कपाल काट्ने प्रविधिहरूको लागि अनुमति दिन्छ।
नाईका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कपाल काट्ने कैंची साइज 6.0 हो"।लोकप्रिय नाईको लागि लामो ब्लेड उपयुक्त छ कैंची-ओभर-कम्ब प्रविधि .
यदि तपाइँ नजिक र विस्तृत काम काट्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, छोटो लम्बाइ (५.०" वा ५.५") रुचाइन्छ किनकि यसले थप सिर्जना गर्छ सानो जटिल कटौती संग सटीक आकारजबकि लामो ब्लेडहरू (6.0", 6.5" र 7.0") को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कपाल काट्ने जस्ता धेरै कामहरू कोण वा प्रयोग गरेर कंघी मा कैंची दृष्टिकोण जसलाई अधिक परिशुद्धता चाहिन्छ, तर अन्य शैलीहरू भन्दा कम चाल।
त्यहाँ छन् धेरै प्रकारका ब्लेड लम्बाइहरू सैलुन र नाई पसलहरूमा प्रयोग गरिन्छ। आकारहरू 4.5 "इन्चदेखि 7.5" इन्चसम्म हुन्छन्।
सर्वश्रेष्ठ केश कात्रो सिन्सार ब्रांडहरू के हुन्?
त्यहाँ हेयरड्रेसिङ कैंची ब्रान्डहरूको कुनै कमी छैन। तर यो छनोट गर्न सजिलो छैन पेशेवर कपाल को लागी सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड र हजाम।
सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा भरपर्दो हेयरड्रेसिङ सिजर ब्रान्डहरूले उच्च गुणस्तरको स्टिल, अल्ट्रा-शार्प कपाल काट्ने ब्लेडहरू प्रयोग गर्छन् र किफायती मूल्यहरूमा कातरहरू प्रस्ताव गर्छन्।
केही प्रसिद्ध उदाहरणहरू समावेश छन् Jaguar केश कपाल, Joewell भेडाहरू, Yasaka कैंची, Mina कैंची, जान्तेत्सु र Kamisori भेडाहरू.
घरको लागि कपाल कैंची कसरी छनौट गर्ने?
तपाईंले सोच्न आवश्यक छ भौतिक, आकार र ब्लेड प्रकार साथै आकार. यहाँ घर-उपयोगको लागि हाम्रो उत्तम कैंची ब्राउज गर्नुहोस्!
तपाईंको छनौट पर्याप्त सहज हुनुपर्छ ताकि तपाईं सक्नुहुन्छ सजिलै आफ्नो कपाल मार्फत टुक्रा यसको साथ प्रयोग गर्दा एर्गोनोमिक ह्यान्डल धेरै मानिसहरूको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा मिलाउने डिजाइन!
घर सुविधाको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कपाल काट्ने किटहरू तेज ब्लेडहरू र आरामदायक अफसेट ह्यान्डलहरू। यी तपाईंको आफ्नै कपाल काट्नका लागि उपयुक्त छन्, वा घरमा अरू कसैको।
यो उत्तम कपाल काट्ने कैंची आकार (लम्बाइ) घर प्रयोगको लागि यदि "" वा ""। यो उत्तम अलराउन्डर साइज हो जुन तपाईंको कपाल ट्रिमिङ वा रिस्टाइल गर्दा सबैको हातमा फिट हुन्छ।
मेरो लागि मेरो हेयरड्रेसिङ कैंची छान्नुहोस्: कुन जोडी सबैलाई सुहाउँछ
त्यहाँ धेरै प्रकारका हेयरड्रेसिङ कैंचीहरू छन्, तर त्यहाँ सबैलाई सूट गर्ने एउटा आकार छ?
चाहे तपाईं एक पेशेवर हेयरस्टाइलिस्ट, नाई, वा भर्खरै कपाल काट्ने तरिका सिक्न थाले, त्यहाँ एक जोडी छ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप छ!
यो सबैभन्दा सामान्य कैंची आकार पुरुष र महिला द्वारा प्रयोग गरिएको 5.5 "वा 6.0" हो।
यो सबैभन्दा लोकप्रिय कैंची ह्यान्डलहरू क्लासिक/स्ट्रेट, वा अफसेट ह्यान्डल हुन्।
यदि तपाइँ अनिश्चित हुनुहुन्छ जो कपाल कैंची ब्लेड तपाईलाई उपयुक्त छ, त्यसपछि कन्भेक्स, वा बेभल एज ब्लेडको लागि जानुहोस्।
एक छान्नुहोस् लोकप्रिय कैंची ब्रान्डबाट कपाल काट्ने किटर तपाइँ केहि समय मा कपाल काट्नुहुनेछ!
यदि तपाइँसँग कपाल काट्ने कैंची तपाइँको आवश्यकताहरु लाई उपयुक्त छ भन्ने बारे प्रश्न छ भने, हामीलाई hello@japanscissors.com.au मा इमेल गर्नुहोस्
विभिन्न कैंची ह्यान्डलहरू: अफसेट, सीधा/क्लासिक, कुंडा र क्रेन
कपाल कैंचीका लागि विभिन्न प्रकारका ह्यान्डलहरू उपलब्ध छन् अफसेट, क्लासिक सीधा, घुमाउनुहोस् र क्रेन। यो सबैभन्दा लोकप्रिय कैंची ह्यान्डल प्रकार अफसेट ह्यान्डल र क्लासिक स्ट्रेट (विपरीत) ह्यान्डल हो। कुंडा र क्रेन अधिक ergonomic को ह्यान्डल प्रकार, तर केहि कपाल स्टाइलिस्ट र नाई को लागी होल्ड गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
कपाल कैंची संग अफसेट ह्यान्डलहरू को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो हेयरस्टाइलिस्ट, नाई र घर-कपाल। तिनीहरूले एक आरामदायक पकड प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई तपाइँको नाडी दुखाइ को माध्यम बाट सजिलो पहुँच को लागी अनुमति दिन्छ किनभने यो ब्लेड देखि टाढा घुमाउछ, औंलाको मांसपेशिहरु मा तनाव कम गर्दछ!
सीधा ह्यान्डल कैंची हो कैंची को सबै भन्दा साधारण प्रकार सीधा, बलियो पकडको साथ जुन दायाँ-हात र बायाँ हात भएका मानिसहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्।
यो क्रेन कैंची ह्यान्डल गर्दछ ब्लेड तिर वक्र र तिनीहरू साना हात भएका मानिसहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। द एर्गोनोमिक डिजाइन सीधा कैंची ह्यान्डल भन्दा बढी सहज पकड प्रदान गर्दछ, तिनीहरूलाई तपाइँको उपकरण छोड्ने वा हराउने बारे चिन्ता नगरी चीजहरू काट्न मद्दत गर्नको लागि उत्तम बनाउँदछ!
यो कुंडा कैंची ह्यान्डलहरू एक अधिक आधुनिक डिजाइन हो जुन लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछ। तिनीहरू अफसेट स्काइथ ह्यान्डल जस्तै छन्, तर यो सजिलो छ- 360 डिग्री घुमाउनुहोस् र आफ्नो नाडीमा धेरै तनाव बिना विभिन्न कोणहरूमा कपाल काट्न सक्नुहुन्छ!
बिभिन्न कैंची ब्लेडहरू: कन्भेक्स, बेभल, सेरेटेड, वा होलो-ग्राउन्ड एज?
जब तपाइँ कपाल काट्ने कैंचीको उत्तम जोडी खोज्दै हुनुहुन्छ, मैले कुन प्रकारको ब्लेड किनारा पाउनु पर्छ भनेर विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ?
त्यहाँ चार मुख्य प्रकारहरू छन्: उत्तल(अति तीव्र), beveled(अलराउन्डर र टिकाउ), दाँते(कपाल झर्ने सजिलै समात्छ) वा खाली जमीन अवतल।
यी सबैका फरक-फरक फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, त्यसैले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको आवश्यकता अनुसार जुनसुकै उपयुक्त छ किन्न अघि तिनीहरूको लागि सही छ!
तपाईं हुनुहुन्छ भने एक व्यावसायिक, त्यसपछि खोक्रो ग्राउन्ड, कन्भेक्स वा बेभल किनारा ब्लेडले तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप हुनेछ।
यद्यपि, यदि तपाईं मा हुनुहुन्छ घरएक विद्यार्थी वा प्रशिक्षु, त्यसपछि तपाइँ कुनै पनि कन्भेक्स, बेभल वा माइक्रो-सेरेटेड एज ब्लेड छान्न सक्नुहुन्छ।
जति राम्रो स्टिल, तिखो ब्लेड र तपाईंको कपाल काट्ने कातरहरू अझ प्रभावकारी हुन्छन्।
विभिन्न इस्पात र सामग्री: जापानी, जर्मन र अधिक!
हामीले सोध्ने सबैभन्दा सामान्य प्रश्नहरू मध्ये एक हो "किन कपाल काट्ने कैंची यति महँगो छ?", र यो सामान्यतया उच्च-गुणस्तर (र महँगो) स्टीलको कारणले हुन्छ।
त्यहाँ एक सय भन्दा बढी प्रकारका स्टील र सामग्रीहरू छन् जुन उच्च गुणस्तरको कैंची बनाउन प्रयोग गरिन्छ, तर सबैभन्दा लोकप्रिय समावेश छन्:
440C, 10CR, VG-10, 9CR, 8CR, Cobalt, Titanium, Stainless Allow Steel, Chromium, र थप!
उच्च गुणस्तर कैंची इस्पात र सस्तो इस्पात बीचको भिन्नता कठोरता (HRC) हो।
कैंची स्टीलको उच्च गुणस्तर, उच्च कठोरता। एक प्रिमियम जोडी को लागी, तपाइँ लगभग 60 HRC को अपेक्षा गर्नुहुनेछ। र सस्तो जोडीको लागि, तपाईंले लगभग 55-56 HRC पाउनुहुनेछ।
पातलो हुने कैंचीमा कतिवटा दाँत हुनुपर्छ?
कपाललाई पातलो बनाउन वा मिलाउनको लागि पातलो कैंची प्रयोग गरिन्छ।
तिनीहरूको एक ब्लेडमा दाँतहरू छन् जसले धेरै लम्बाइ नहटाई तपाईंको कपाल काट्ने बाक्लो क्षेत्रहरूबाट थप बल्क हटाउन मद्दत गर्दछ, र प्रत्येक जोडीको दाँतको संख्या र आकार पनि हुन सक्छ।
यी विशेष उपकरणहरूमा 30 - 45 दाँतहरू छन् जुन तिनीहरूको ब्लेड कति लामो छन् र कैंचीको चिन्हहरू मिलाउन वा केवल एक साधारण स्निपको साथ काटिएको ब्लन्टनेस हटाउन सजिलो बनाउँदछ!
फिंगर रिंग इन्सर्ट्स के हो?
कैंचीको औंलाको औंलाले ब्लेडबाट आफ्नो औंलाहरू जोगाएर काट्ने र कैंचीको चोटपटकबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ।
तिनीहरू ती खतरनाक उपकरणहरूमा पकड सुधार गर्ने उत्कृष्ट तरिका हुन्, त्यसैले तिनीहरूसँग कपाल काट्दा तिनीहरू नियन्त्रण बाहिर चिप्लिने छैनन्!
कपाल काट्ने कैंची को विभिन्न प्रकार के हो?
त्यहाँ धेरै प्रकारका हेयरड्रेसिङ कैंचीहरू छन्। प्रत्येक विशेष उद्देश्यको लागि डिजाइन गरिएको हो। केही कैंचीहरू भारी कपाल काट्नका लागि डिजाइन गरिएका छन् र अरूहरू विशेष रूपमा सटीक काट्नका लागि डिजाइन गरिएका छन्।
यहाँ केहि सामान्य रूपमा प्रयोग हुने कपाल कैंचीहरू छन्:
पातलो कतरनी: बाक्लो वा घुमाउरो कपाल हटाउनको लागि पातलो कातरहरू प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले एक ब्लेड फिचर गर्दछ जसले केही कपाल फ्याँक्छ तर बाँकीलाई अक्षुण्ण छोड्छ।
टेक्स्चराइजिंग कातरहरू: बनावट र कपालमा बनावट थप्न टेक्स्चराइजिङ शियरहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले एउटा किनाराको सुविधा दिन्छ जुन अन्त तिर घुम्छ र एक edgier लुक सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
कपाल काट्ने कपाल: कपाल काट्ने कातरहरू प्राय: प्रयोग हुने कैंचीहरू हुन् जुन विभिन्न लम्बाइहरूमा कपाल काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले सीधा ब्लेड किनारहरू देखाउँछन् जुन सटीक काट्नको लागि उपयुक्त छ।
नाई कातरहरू: बार्बर शियरहरू विशेष गरी ठूला कपाल काट्न र कपालको ठूला भागहरू तुरुन्तै टुक्रा पार्नको लागि तीखो किनार देखाउन डिजाइन गरिएको हो।
के बायाँ-हात कपाल स्टाइलिस्टले दाहिने हातको कैंची प्रयोग गर्न सक्छ?
हो, बायाँ हात भएको कपाल स्टाइलिस्टले दाहिने हातको कैंची प्रयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, तिनीहरू प्रयोग गर्न वा बायाँ-हात कैंची जस्तै काम गर्न सजिलो छैन।
बायाँ हातका कपाल स्टाइलिस्टहरूले वास्तविक प्रयोग गर्नुपर्छ बायाँ हात कैंची कपाल काट्ने सबैभन्दा प्रभावकारी परिणामहरूको लागि।
वास्तविक बायाँ-हात ह्यान्डल कपाल काटन प्रयोग गर्नाले दोहोरिने स्ट्रेन ट्रमा (RSI) को सम्भावना कम गर्न सक्छ र कपाल काट्ने कार्यलाई अझ सजिलो र सहज बनाउन सक्छ।
मर्मत र शार्पनिङ
के सबै हेयरड्रेसिङ कैंचीहरूलाई तिखार्न आवश्यक छ?
हो, सबै कपाल कैंची समय संग तिखारिनु पर्छ। उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने स्टीलको प्रकार र ब्लेडको किनाराले कैंचीलाई तिखारिनु पर्ने आवृत्ति निर्धारण गर्दछ।
ब्लेडका किनारहरू उत्तल हुन्छन् जापानी स्टेनलेस स्टिल कातरहरूसँगै कपाल कैंचीको सबैभन्दा प्रभावकारी किस्महरू मध्ये एक हुन सक्छ जसले तिनीहरूको तीखोपन सबैभन्दा लामो समयसम्म राख्छ।
गोलाकार भएका ब्लेडका किनारहरू वा कार्बन स्टिल सियरमा दुईवटा सबैभन्दा हानिकारक प्रकारका कपाल कैंचीहरू हुन्छन् जसले तीखो किनारा राख्न सक्छ।
के म घरमा कैंची तिखार्न सक्छु?
हो, घरमा कपाल काट्नका लागि कैंचीलाई तिखार्न ढुङ्गा वा डायमण्ड शार्पनर उपकरणहरूले तिखार्न सम्भव छ।
यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले ब्लेडलाई क्षति पुर्‍याउनबाट रोक्नको लागि सही प्रकारको शार्पनर छनौट गर्नुभयो। यदि तपाईंले आफ्नो कैंचीलाई तिखार्ने क्रममा गलत काम गर्नुभयो भने तपाईंले ब्लेडलाई हानि पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ।
व्यावसायिक शार्पनिङ सेवाहरू के हुन्?
व्यावसायिक सिजर शार्पनिङ सेवाहरू कपाल काट्ने कैंचीको मर्मत र मर्मतमा विशेषज्ञता गर्ने फर्म हो। तिनीहरूले ब्लेड तिखार्न, तनाव परिवर्तन गर्न र काट्ने उपकरणहरू सफा गर्न सक्षम छन् तिनीहरूलाई नयाँ जस्तै काम गर्न अनुमति दिन।
व्यावसायिक तिर्ने सेवाहरूको प्रमुख फाइदाहरूमा तपाईंले प्रयोग गर्ने कैंची तिखारिएको र तीखो राखिएको आश्वासन समावेश गर्दछ।
साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कैंचीहरू तपाईंको हात प्रयोग गरेर काम गर्न सेट गरिएको छ।
कति पटक तपाइँ तपाइँको कैंची तिखार्न आवश्यक छ?
कपाल काट्नका लागि कपाल तिखो पार्ने सुझाव दिइन्छ जब तिनीहरूले आफ्नो तीखोपन गुमाउन थाल्छन्। यसले तपाइँको ब्लेडको तीखोपन सुनिश्चित गर्नेछ र उनीहरूले इष्टतम तरिकामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भनेर सुनिश्चित गर्नेछ।
कपाल कातरहरू प्रत्येक पटक काम गर्दा तिखार्न सकिन्छ। अमेरिकी नाई पसल र सैलुनहरूको अध्ययनको आधारमा, प्रायः रोजगारीमा राखिने कपाल काट्ने शियर हरेक तीन देखि नौ महिनामा तिखारिनेछ।
तपाइँ कसरी बताउनुहुन्छ जब तपाइँको कैंची कपाल काट्न पर्याप्त छ?
तपाईंको कपाल काट्नु भिडियोहरूमा पूरा गर्न पर्याप्त सजिलो छ, तथापि, तपाईंले कल्पना गर्नुभन्दा उत्तम कट प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ।
आफ्नो कपाल काट्ने प्रयास गर्ने अधिकांश मानिसहरूलाई असंतुलित कटको साथ छोडिनेछ, र कपाललाई नोक्सान गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कपाल भाँच्नु र असन्तुलित हुनुको कारण यो हो कि मानिसहरूले प्रयोग गर्ने कैंचीमा पर्याप्त तीखोपन हुँदैन। धारिलो कैंचीले तिखो काट्छ र कपालको किनाराको कपाललाई त्यसैगरी हानि गर्दैन। कपडा काट्ने कल्पना गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ कपडा काट्नको लागि नियमित सुस्त कैंची प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँले काट्नु भएको किनाराहरू ब्रेक वा फ्याँकेका छन्। ठ्याक्कै एउटै विधिमा कपाल काट्नु तपाईंको लागि राम्रो विचार होइन, त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तीखो र चिल्लो हुने कैंची छनोट गर्नुभयो।
निस्सन्देह धेरै मानिसहरू आफ्नो कैंची को काट्ने क्षमता सचेत छैनन्। कपाल। यस लेखले कपाल काट्ने तपाईंको कैंचीको क्षमता निर्धारण गर्न र भान्साको कैंचीको सट्टा कपाल कैंची छान्नुको कारण निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।
म मेरो कपाल कैंचीमा तनाव कसरी समायोजन गर्छु?
तपाईले आफ्नो कपाल कैंचीको तनावलाई टेन्सन कुञ्जी वा स्क्रू ड्राइभर प्रयोग गरेर स्क्रूलाई कस्न वा ढिलो गर्न परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै स्क्रूहरू कस्न नदिनुहोस्, किनकि यसले काट्ने किनारलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको तनाव पर्याप्त सेट गर्नुहोस् कि ब्लेडहरू उनीहरूको आफ्नै वजनको कारणले खुला नहोस्, तर धेरै तंग छैन कि ब्लेडहरू बन्द हुँदा र खोल्दा एकअर्काको विरुद्धमा रगड्छन्।
अमेरिकन एक्सप्रेस स्याउ पे सामान्य पत्ता लगाउनुहोस् गुगल भुक्तानी JCB मास्टरकार्ड PayPal पसल भुक्तान भिषा